रोनाल्डो र ग्रिजमनप्रति ला लिगा अध्यक्षको भरोसा, समर्थकको ध्यान कता ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
रोनाल्डो र ग्रिजमनप्रति ला लिगा अध्यक्षको भरोसा, समर्थकको ध्यान कता ?
Posted by Pariwartan Devkota | ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १८:५६ |
३० जेष्ठ, काठमाण्डौं । रियल म्याड्रिडका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र एट्लेटिको म्याड्रिडका एन्टोनी ग्रिजमन अर्को सिजन नयाँ क्लब जाने चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । तर, ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर टेबासले भने रोनाल्डो र ग्रिजमन अर्को सिजन पनि आ आफ्नै क्लबमा रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । समर ट्रान्सफर अगस्टको अन्तिममा बन्द हुनेछ ।
पाँच वर्षमा चौथो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेपछि गत महिना रोनाल्डोले रियल छाड्ने संकेत गरेका थिए । लिभरपुललाई फाइनलमा हराएपछि उनले चाडै समर्थकलाई आफ्नो भविष्यका बारेमा जानकारी दिने बताएका थिए । त्यसपछि उनका विषयमा अनेक खाले अड्कलबाजी सुरु भएको थियो ।
यद्दपी विश्व कप सुरु हुन एक दिन बाँकी रहँदा पनि रोनाल्डोले भविष्यका बारेमा बोलेका भने छैनन् । उनको कप्तानीमा पोर्चुगल विश्व कप खेल्ने तयारीमा यति बेला रसियामा रहेको छ । ग्रिजमनले अघिल्लो वर्षनै एट्लेटिको छाड्ने चर्चा चलेको थियो । तर, क्लबमाथिको सरुवा प्रतिबन्धका कारण उनले क्लब छाड्न मिलेन ।
अहिले फेरि उनी नयाँ क्लब जाने चर्चा सुरु भएको छ । उनी ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना पुग्ने धेरैको अनुमान गरएको छ । यद्दपी टेबासले भने दुवै खेलाडी कतै नजाने विश्वास गरेका छन् ।
यसपटकको ट्रान्सफर विन्डो रोनाल्डो र ग्रिजमनका कारण समर्थका लागि चाख लाग्दो हुने सम्भावना छ । अन्तमा उनीहरु नयाँ क्लब जान्छन् वा पुरानैमा रहन्छन् भन्नेमा समर्थकको ध्यान तानिरहनेछ ।
Previousभारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि जनकपुरधाम ‘अझ चर्चित’, पर्यटकहरुको ओइरो !
Nextभीएलएन सञ्चालक धरौटीमा रिहा भएलगत्तै फेरी पक्राउ !
सात वर्षकी बालिका बलात्कृत
१९ श्रावण २०७३, बुधबार ०९:५६
काँग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ: लेखक
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार १४:३९
किताब विनै वार्षिक परीक्षाको तयारी गर्दै विद्यार्थी
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १०:४०
रग्बी विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियालाई
१७ मंसिर २०७४, आईतवार ०८:४५